အဆိုပါ paparazzi စိတ်ဝင်စားဆွီဒင်သရုပ်ဆောင်အလက်ဇန္ဒား Skarsgard ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကိုရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်း၌သူ၏အောင်မြင်မှုထက်လျော့နည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးလူကြိုက်များသူအဲရစ် Northman ကစားရှိရာတီဗီစီးရီး "စစ်မှန်သောသွေး" (2008-2014), ရိုက်ကူးပြီးနောက် လာ. သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။ ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့တပုဒ်မှာ ပို. ပို. မိမိအ Amore ရေးရာစိတ်ဝင်စားဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါကသရုပ်ဆောင်ကိုနှစ်သက်ပေမယ့်အစားအလွန်ဒေါသထွက်လာတဲ့ခဲ့ပါဘူး။ အင်တာဗျူးမှာတော့သူက paparazzi မကြာမီစိတ္တဇသူ့ကိုငါသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားခဲ့ကြသည်: "ဒီကျော်ကြားမှုကိုငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်ဟုငါထင်။ ငါသည်တပါတီမှတစ်ဦးစားသောက်ဆိုင်၌သူ၏ရည်းစားနဲ့အတူသွားရမယ့်သာမန်လူတစ်ဦးကြိုက်ကြဘူး။ နေရာတိုင်းငါ့ကိုအောက်ပါကင်မရာများနှင့်အတူဤရွေ့ကားဂျာနယ်လစ်။ ငါမရှိတော့ရုံပန်းခြံခုံတန်းရှည်ပေါ်တွင်သူမ၏နှင့်အတူထိုင်နိုင်သည် - နေရာတိုင်းမှာသူတို့နှာခေါင်းပြီးမှ "။
ဆွီဒင်သရုပ်ဆောင်အလက်ဇန္ဒား Skarsgard နှင့်သူ၏ရည်းစား
အဆိုပါစာနယ်ဇင်းများစွာကျော်ကြားဝတ္ထုအကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေအတွက်ပြည့်ဝ၏။ သူက 2008 ခုနှစ်မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဘဝဆက်ဆံရေးအဘို့ပေါ်ထွန်းသောမတိုင်မီဒီတော့သူကအလှအပမန်ဒါ Seyfried တစ်ခုမင်းသမီး, အဆိုတော်ဟောင်းမော်ဒယ်နှင့်အတူဇာတ်ခင်းနေတယ်။ တစ်နှစ်အကြာတွင်သည်, မိမိသစ်ကိုစိတ်အားထက်သန်မှုပိုလန်ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့် Izabella Miko ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အလက်ဇန်းဒါး Skarsgard တဦးတည်းကမိန်းကလေးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်တာ၌လည့်စုံတွဲတစ်တွဲပြီးနောက်အခြားဖို့လမ်းကိုပေး၏။ သူမသည်အဆိုပါဆုများအတွက်ဆန်ခါတင် "ရွှေကမ္ဘာလုံး" ဟုအဆိုပါ set ကိုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအပေါ်တစ်ဦးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့် "သူဟာ Emmy" တီဗီစီးရီး "စစ်မှန်သောသွေး" အီဗန်ရာခေလသည် Wood ကအတွက်ဆိုဖီ-အန်း Leclerc ကစားသူ။ သို့သော်ဤဝတ္ထု, ယခင်သူတွေကိုကဲ့သို့အဖြစ်ရုတ်တရက်ကစတင်ခဲ့သောအဖြစ်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ 2009 ခုနှစ်တွင်ပြတ်ဆက်ဆံမှုတရံ။ သို့သော်မကြာမြင့်စွာတစ်ဦးသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးတည်းကျန်ရစ် - ကအသစ်တစ်ခုကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ sexy အညိုရောင်ဆံပင်, ဆှီဒငျမင်းသမီးနှင့် dancer သူ Alicia Vikander ဖြစ်လာသည်။ မိမိအသူမ၏ထပ်တလဲလဲပန်းခြံအတွင်းရှိနမ်းမြင်ကြ, သူတို့သည်မကြာမီပွဲတော်ရုပ်ပြ-Con သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်မင်းသားကိုတရားဝင်သူတို့ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်, ကိုးကား, ဆက်ဆံရေးကအတော်လေးလေးနက်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
အလက်ဇန်းဒါးအားဖြင့်အခိုင်အမာအဖြစ်သူတို့က, ခဲ့ကြပါတယ်အတော်လေးဒါပြင်းထန်မဟုတ်သော်လည်း - လစုံတွဲတစ်တွဲသူ Alicia မင်းသားတက်ကြွစွာအများပြည်သူအတွက်ပရောပရည်သည်သူဖက်များနှင့်လက်ဖြင့်ကြင်ကြင်နာနာကျင်းပပေးသောရန်, Charlize Theron အစားထိုး။ မကြာခင်မှာပဲသည်သူ၏သစ်ကိုဝါသနာ Lovelace ညစာသွားရာမနည်းလူသိများတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, Rihanna, ဖြစ်လာသည်။ သို့သော်အလက်ဇန်းဒါး Skarsgard နှင့်နီနာ Dobrev ကြုံတွေ့နှင့်နေရာအတည်မပြုနိုင်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းကောလာဟလများ။ အဆိုပါသရုပ်ဆောင်မင်းသမီးသူတို့အတော်လေးကိုထောက်ပံ့သောအင်တာဗျူးများအတွက်ထပ်တလဲလဲပြောပါတယ် ဖော်ရွေသောဆက်ဆံရေး ။ သို့သော်ကွန်ယက်ဓာတ်ပုံ-အထောက်အထားကိုရှာဖွေမဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။
အလက်ဇန်းဒါး Skarsgard - လိင်တူချစ်သူ?
အတော်များများကပရိတ်သတ်တွေအတွက်သူရဲကောင်းချောမောဆွီဒင်နိုင်ငံသားများသတ်မှတ် Theo အလက်ဇန္ဒားအပေါ်တစ်ဦးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အိပ်ယာအပျော်အပါးစေ့စပ်ထားတဲ့အတွက်လာမယ့်စီးရီး "စစ်မှန်သောသွေး," ထဲကဖန်သားပြင်ပြီးနောက်ထိုကဲ့သို့သောအတှေးအရှိခြင်းနေကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးနိုင်အောင်ဿုံအများအပြားကသတင်းထောက်များကိုရှိမရှိအစားနှစ်ခုလိင်တူဆက်ဆံအံ့ဩဘူးသောမြင်ကွင်းတစ်ခုကစားနေကြသည်။ အမျိုးသမီးများနေ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတစ်ခုသက်ပြင်းချရှူနိုင် - မယ့်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါရမီသရုပ်ဆောင်သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး, ဒါပေမယ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရုံများ၏ဘို့အလိုငှါ, သူတစ်ဦးသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်, လူကိုနမ်းဖြစ်လာဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိတ် Bosworth နှင့်အလက်ဇန်းဒါး Skarsgard
သီးခြားစီအဲဒီနှစျခုနာမည်ကြီးတွေ၏မတ်ေတာဇာတ်လမ်းကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်။ များစွာသောကြယ်များနှင့်အတူအတိုစိတ်ဝင်စားသည်နောက်, ကိတ်ကယ့်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆံပင်ရွှေရောင်မှမိမိခေါင်းကိုလှည့်သောတစ်ဦးတည်းသောဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုသူနှစ်ဦးကို 2009 ခုနှစ်တွင်ချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ရုပ်ရှင်၏သတ်မှတ်ချက်အပေါ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး "Straw Dogs ကို။ " သူတို့က paparazzi prying မှမိမိတို့ခံစားချက်များကိုဖုံးကွယ်ကြဘူး, မကြာခဏကျနော်တို့လက်ကိုင်ပေါ်လမ်းလျှောက်, သူတို့ကမြို့ပြဥယျာဉ်, ပြပွဲ, ပါတီများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် 2011 ခုနှစ်, ကိတ်နှင့်အဲလက်စ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သဘောတူညီခကျြဖွငျ့နှံ့ပြား။
မိမိတို့ကိုယ်ကိုဝန်ခံ: အနုပညာရှင်ကိုပြောသည်ရာ 20 ကြောက်မက်ဘွယ်သောအလေ့အကျင့်,
အဆိုပါတိုက်ခိုက်သူနှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့ Rihanna ၏အိမ်တော်သို့ ဝင်.
အဆိုပါ Met Gala မှာ Rihanna ၏ 8 အများဆုံးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပုံရိပ်များ: Rapunzel မှ omelets ထံမှ
အလက်ဇန်းဒါး Skarsgard Margot ရော်ဘီနှင့်တွေ့ဆုံ?
high-profile ကိုချုပ်နွေရာသီ 2016 တစ်ခုမှာရုပ်ရှင် "Tarzan ဖြစ်ခဲ့သည်။ Margo သရုပ်ဆောင်ဒဏ္ဍာရီ "အလက်ဇန်းဒါးထံသို့သွားလေ၏။ ပြပွဲပြီးနောက်နှစ်ခုအကြားရုံစီမံကိနျးကိုအလုပ်လုပ်ထက်ပိုမိုကြောင်းကောလာဟလရှိခဲ့သည်။ ထိုအ Vogue ဘို့မိမိတို့ဓာတ်ပုံနောက်ထပ်မီးလောင်စာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အဖြစ်သို့သော်, မိန်းကလေးတစ်ဦးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးတွမ် Ekerli နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
တေလာဆွစ်ဖ်ခရစ္စမတ်၏ 96 နှစ်အရွယ်ပန်ကာချီးကျူး
Chloe Moretz အဲလက်စ်ရိုဝီနဲ့ရက်စွဲကိုသွား
Sarah Jessica Parker တို့၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
သူ Jean-Claude ဗန် Damme ၏အငယ်ဆုံးသားအဖမ်းခံရ
Britney Spears ဆမ် Asgari သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့ချီးကျူး
အတ္ထုပ္ပတ္တိ Melania Trump
မင်းသားဟယ်ရီနှင့် Meghan Markle တစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်ဘို့ဂျမေကာမြို့သို့သွား၏
Young ကရည်းစားနောက်တဖန် Heidi Klum ပစ်ချ
Angelina Jolie နဲ့ Brad Pitt - ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါသအမျက်သည်အခြားအရှုပ်တော်ပုံ
တွမ် Hiddleston တေလာဆွစ်ဖ်ကသူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထက်တွင်တန်ဖိုးထား!
နွားငယ်သားများပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း - စာရွက်
ပထမဦးဆုံးအတန်းအစား 1 အချိန်
Ibiza အတွက်ထောင်ဒဏ် Lionel Messi နဲ့သူ့မိသားစုကြွင်းသောအရာရှောင်ကြဉ်ပါ
ဘုရားမောလုပ် - ဒဏ္ဍာရီ, ဘုရားမောလုပ်အကြောင်းကို inteersno အချက်အလက်များ, မိမိသားသမီးလောင်
Swimsuit 2013 ကူ
Gazpacho -7မူရင်းချက်ပြုတ်နည်းများအရသာရှိတဲ့စပိန်ဟင်းချို
Grudnichok သူမ၏နောက်ကျော arches
Angelina Jolie နဲ့ Brad Pitt ကွာရှင်းမှုအတွက်အခြေအနေများသတ်မှတ်သောပါပြီ
Irina Shayk နှင့် Bradley Cooper သူတို့ဟယ်လိုကျင်းပပုံကိုပြသ
နာတာရှည်ဂလင်းတမျိုး - လူကြီးများအတွက်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး
Crepe-chiffon - ထည်များအတွက်လော